“पेशा त परिवर्तन गरौंला तर, खाने चाहीँ के नि ? हामीलाई गहिरो चिन्ता छ,” :: Artha Sansar News | Economic and Political News | Nepal online News
“पेशा त परिवर्तन गरौंला तर, खाने चाहीँ के नि ? हामीलाई गहिरो चिन्ता छ,”
माछा लिनुस्, माछा ! बागमतीको माछा ! आफूलाई फापरबारीको बताउने एक व्यक्ति हेटौँडाको महोत्सव परिसरमा सिलमा उनेको माछा बेच्दै थिए । “साँच्चै बागमती कै हो ?,” एक महिलाले शङ्का व्यक्त गरिन् । कसम खान नपर्ने अवस्था बनाउँदै व्यापारीले चलाखी गरे – “बागमतीकै हो । बागमती त सुकेको गुलाफ जस्तै भयो । सधैं लटरम्म फुल्ने गुलाफ सुकेपछि कस्तो देखिन्छ हो, त्यस्तै भयो बागमती ।” उनले लाक्षणिक रुपमा कुरा प्रष्ट पार्ने चेष्टा गरे । निक्कै नै साहित्यिक भाषा प्रयोग गरेर बोल्ने त्यस व्यापारीले आफ्नो परिचय दिन मानेनन् ।
“तिर्खा लागेको भए खोलातिर जानुहोस्,” उनले माछाको खानी मानिने राई गाउँतिरै जान सुझाउँदै थपे पनि ।
उनले भने – “मकवानपुर, ललितपुर र सिन्धुलीका किसानले प्रयोग गरेको विषादी स्थानीय खहरे खोल्सा हँुदै नदीमा पुगेर जलचरलाई प्रभावित पारेको हुन सक्छ ।” यो पूरै देशको समस्या हो । समयमै नसोचे जैविक सन्तुलनमै समस्या उत्पन्न हुने र त्यसले विकराल समस्या निम्त्याउन सक्ने वातावरण विद्हरु औँल्याउँछन् ।